Hiob 39 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Mmoa a Onyankopɔn bɔɔ wɔn no ma yehu sɛ nnipa nnim hwee (1-30)
Abotan so mpɔnkye ne ɔwansan (1-4)
Sare so afurum (5-8)
Akorɔma ne ɔkɔre (26-30)
39 “Wunim bere a bepɔw so mpɔnkye de wo?+ Na woahu sɛ ɔwansan rewo pɛn?+ 2 Wubetumi akan abosome dodow a wɔn mma di wɔ wɔn yam? Wunim bere a wɔde wo? 3 Wɔkotow wo wɔn mma,Na wɔn awo mu yaw no to twa. 4 Wɔn mma nya ahoɔden, na wonyinyin wɔ wuram;Wopue kɔ, na wɔnsan mma wɔn nkyɛn bio. 5 Hena na ɔma sare so afurum de ne ho?+Na hena na ɔsan sare so afurum nhama? 6 Mede sare so ayɛ ne fi,Na mede nkyene kurow ayɛ ne tenabea. 7 Ɔmfa gyegyeegye a ɛwɔ kurow mu nyɛ hwee;Ɔnte nea ɔka no kɔ adwuma no nteɛteɛm. 8 Okyinkyin mmepɔw so hwehwɛ adidibea;Ɔhwehwɛ wura biara a ɛyɛ frɔmfrɔm. 9 Wohwɛ a, ɛkoɔ* bɛpene so asom wo?+ Anaa ɔbɛda buw a woabobɔ* mu anadwo? 10 Wubetumi de hama akyekyere ɛkoɔ ama watwa nkofi nteaanteaa ama wo?Anaa obedi w’akyi afuntum wɔ obon mu? 11 Wode wo ho bɛto n’ahoɔden dodow so,Na wode w’adwuma kɛse ahyɛ ne nsa? 12 Wubenya ne mu awerɛhyem sɛ ɔde wo nnɔbae* bɛbrɛ wo?Na ɔbɛboaboa ano aba w’awiporowbea? 13 Sohori de anigye bɔ ne ntaban mu,Nanso wohwɛ a, ne ntaban ne ne ntakra ne asukɔnkɔn de na ɛsɛ?+ 14 Efisɛ ɔtow ne nkosua gu fam,Na mfuturu mu na ɔma enya ɔhyew. 15 Ne werɛ fi sɛ obi nan betumi abobɔ no,Anaa wuram aboa bi betumi atiatia so. 16 Ɔbɔ ne mma atirimɔden; ɔyɛ wɔn te sɛ nea wɔnyɛ ne mma;+Ɛnhaw no sɛ ɔbɛbrɛ agu. 17 Efisɛ Onyankopɔn ama nyansa abɔ no,*Na wamma wannya ntease. 18 Nanso sɛ ɔsɔre, na ɔbɔ ne ntaban mu a,Ɔserew ɔpɔnkɔ ne nea ɔte no so. 19 Wo na woma ɔpɔnkɔ ahoɔden?+ Anaa wo na wode nwi hyehyɛ ne kɔn mu? 20 Wubetumi ama wahuruhuruw sɛ ntutummɛ? Sɛ ɔporow ne hwene mu a, ɛyɛ hu paa.+ 21 Ɔde ne nan pempem fam wɔ obon mu, na ɔde ahoɔden huruhuruw;+Ɔde anibere kɔ ɔko.*+ 22 Ohu ade a ɛyɛ hu a, ɔserew, na onsuro hwee.+ Na onguan mfi sekan ano. 23 Agyan wosow wɔ no so,Peaw ne pɛmɛ twa yerɛwyerɛw. 24 Ne ho pere no, na ogye bum kɔ n’anim,*Sɛ ɔte abɛn nnyigyei a, ontumi nnyina faako.* 25 Sɛ ɔte abɛn a, ɔka sɛ, ‘Ahãã!’ Ɔko wɔ akyirikyiri mpo a, ɔte ne hua,Na ɔte asahene nteɛteɛm ne ɔko nteɛm.+ 26 Wo nyansa nti na akorɔma tu fãã,Na ɔtrɛw ne ntaban mu kyerɛ anaafo anaa? 27 Anaa wo na woma ɔkɔre tu kɔ soro,+Na ɔkɔyɛ ne berebuw wɔ sorosoro?+ 28 Bepɔw so na ɔda anadwo,Ɔte bepɔw atifi tɔnn wɔ ɔbotan so.* 29 Ɛhɔ na ofi hwehwɛ aduan;+N’ani hu ade wɔ akyirikyiri. 30 Na ne mma fifew mogya;Baabi a afunu wɔ no, ɛhɔ na ɔwɔ.”+
^ Anaa “wuram nantwi.”
^ Anaa “ɔbɛda wo mmoa adididaka.”
^ Nt., “w’aba.”
^ Nt., “ama ne werɛ afi nyansa.”
^ Nt., “Opue kohyia akode.”
^ Nt., “ɔmene asaase.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “onnye nni.”
^ Nt., “ɔbotan ano hwirenhwiren.”